Repuso: Angony, Tantano ary Avoahy ny Hevitry ny Mpanjifa & Widget Fijoroana vavolombelona
Manampy orinasa maro eo an-toerana izahay, ao anatin'izany ny rojo fiankinan-doha sy famerenana amin'ny toerana maro, rojo mpitsabo nify, ary orinasa roa serivisy serivisy. Rehefa niditra tao amin'ireo mpanjifa ireo izahay, dia taitra aho, tamin'ny isan'ny orinasa eo an-toerana izay tsy manana fitaovana hitakiana, hanangona, hitantana, hamaly ary hamoaka ny fijoroana vavolombelona sy ny fanamarihan'ny mpanjifany. Hambarako mazava tsara izany… raha hitan'ny olona ny orinasanao (mpanjifa na B2B) mifototra amin'ny toerana misy anao, ny
Evocalize: Teknolojia ara-barotra fiaraha-miasa ho an'ny mpivarotra eo an-toerana sy nasionaly mankany an-toerana
Raha ny momba ny marketing dizitaly, ny mpivarotra eo an-toerana dia sahirana ara-tantara mba haharaka. Na dia ireo izay manao fanandramana amin'ny media sosialy, fikarohana ary dokambarotra nomerika aza dia matetika tsy mahatratra ny fahombiazana mitovy amin'ny azon'ny mpivarotra nasionaly. Izany dia satria matetika ny mpivarotra eo an-toerana dia tsy manana akora tena ilaina - toy ny fahaiza-manao ara-barotra, angona, fotoana, na loharanon-karena - mba hampitomboana ny fiverenana tsara amin'ny fampiasam-bola nomerika. Ny fitaovana ara-barotra ankafizin'ny marika lehibe dia tsy natao ho an'ny
Zoma, Martsa 25, 2022 Zoma, Martsa 25, 2022 Alexander Frolov
Ny folo taona lasa dia iray amin'ny fitomboana goavana ho an'ny marketing influencer, mametraka izany ho paikady tsy maintsy ananana ho an'ny marika amin'ny ezaka ataon'izy ireo hifandray amin'ireo mpihaino azy. Ary ny fiangaviany dia haharitra satria maro ireo marika mitady hiara-miasa amin'ny influencers mba hanehoana ny maha-azo itokiana azy. Miaraka amin'ny fiakaran'ny e-varotra ara-tsosialy, ny famerenana ny fandaniana amin'ny dokam-barotra ho an'ny marketing influencer avy amin'ny fahitalavitra sy ny haino aman-jery ivelan'ny aterineto, ary ny fitomboan'ny fampiasana rindrambaiko manakana doka izay manakana